जुवाडे र चाकडी प्रवृत्तिले कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त हुँदैछ - Nepaliraibar
प्रकाशित मितिः २०७८ बैशाख १, बुधबार
पहिलो कुरा अहिलेका प्रशासकले ज्ञानमा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यो भनेको किताबी ज्ञान होइन । हामीले समाजबाट ज्ञान लिनुपर्छ । त्यो ज्ञान हासिल गर्न समाजको चाहना के छ ? समाजको हित कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारे थाहा पाउनुपर्छ । यसका लागि त त्यही समाजमै घुलमिल गर्नुपर्छ । यसपछिमात्रै समाजको वास्तविक ज्ञान आउँछन् । यसो भयो भने उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । दोस्रो कुरा संविधान, कानुन र स्थापित नीतिभित्र रहेरमात्रै सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । संविधान, कानुन र स्थापित नीतिविपरित आएका आदेश अवज्ञा गर्न सक्नुपर्छ । अब शासकका रूपमा होइन, जनतालाई राम्रो सेवा दिएर मन जित्न सक्नुपर्छ । शासन गरेर सेवा दिने होइन, सेवा दिएर शासन गर्ने हो । जति सम्भव हुन्छ, ‘एक्सपोर्ट अपिनियन’ होइन, जनतासँगको सहभागितामा काम गर्नुपर्छ । जनतालाई प्रक्रिया र संस्थामा सहभागिता गराउनुपर्छ । जनताका माग र गुनासा नीति निर्मातासमक्ष नियमित ल्याइदिन सक्नुपर्छ । पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शी र इमान्दार प्रशासकलाई जनताले नै संरक्षण गर्छ । कर्मचारीतन्त्रको मूल्य ‘हाइआर्की’मा आधारित छन् । प्रक्रियामुखी बढी छ । अब कर्मचारीतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई लोकतान्त्रिक पद्दतिमा ढाल्दै लैजानुपर्छ । राजधानी दैनिकबाट
पछिल्लो २४ घण्टामा ६०३ संक्रमित थपिए, ५ जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमित ३६०८